Wasaaradda Qorsheynta oo shir ku saabsan qorshaha horumarinta Qaranka ka furtay Kismaayo – Radio Daljir
Wasaaradda Qorsheynta oo shir ku saabsan qorshaha horumarinta Qaranka ka furtay Kismaayo
Febraayo 16, 2019 9:00 b 0
Wasaaradda Qorsheynta Dowladda Dhaxe Soomaaliya ayaa maanta magaalada Kismaayo ka daahfurtay Watashiga Qorshaha Horumarimta Qaranka Sagaalaad wareeggiisa kowaad oo lala yeeshay Rugta Ganacsiga Jubbaland.
Hadafka Wasaradda Qorsheynta dalka oo ah in wadatashi lala yeesho Ummadda Soomaaliyeed oo dhan si qorshaha u noqdo mid ay leeyahiin shacabka Soomaaliyeed, waxaana furitaanka munaasabada lagu daahfuryay wadatashiga gooobjoog ka ahaa qaar ka mid ah Wasiirada Maamulka Jubbaland oo kala Wasiirka Qorsheynta, Wasiirka ganacsiga, Wasiiru dowlaha Madaxtooyada, Wasiiru dowlaha Arrimaha Dastuurka iyo Xoghayaha Joogta Wasaradda Qorsheynta JFS Mudane Cabdulqaadir Maxamed Aadan.
Wasiirka Qorsheynta Maamulka Jubbaland Mudane Aadan Ibraahiim Aw Xirsi ayaa sheegay in Jubbaland ay soo dhaweenayaan wadatashigan ee Qorshaha Horumarinta Qaranka Sagaalaad oo si siman uga socda dalka oo dhan, isla markaana mudada afarta maalmood ee wadatashiga ka socda Jubbaland ay hay”adaha iyo bulshada diyaar u yihiin inay ku biiriyaan aragtidooda ku aadan sida lagu horumarin karo qorshaha.
Qaar ka mid ah Wasiiradda Jubbaland oo ka hadlay munaasabadda ayaa waxa ay talaabadan ku tilmaameen in ay tahay mid ahmiyad wayn u leedahay Jubbaland, dhankooda ay bogaadinayaan shaqada ay waddo Wasaaradda Qorsheynta Dowladda dhaxe iyo tan Jubbaland.
Mudane Cabdulqaadir Maxmaed Aadan Xoghyaha Joogtada Wasaaradda Qorsheyna, Maalgashiga iyo Horumairnta Dhaqaalaha ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa qeexay shaqada afarta moolmaad ee wadatahsiga wareegga kowaad ee qorshaha horumarinta Qaranka Sagaalaad ka bilaawday maanta iyo hadafka laga leeyahay in qorshahan wax looga qabto.
Itoobiya iyo Jabuuti oo kala saxiixday heshiiska dhoofinta Gaaska Dabiiciga ah ee DDS
Wasiir Beyle: “ Somaaliya ma aha waddanka ugu musuqa baddan dunida